Michael Frederiksen's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Michael Frederiksen
Michael akawana madhigirii mumakomputa uye bhizinesi sainzi, akazopedza zvidzidzo zvepamusoro kubva kuDenmark repamusoro multimedia chirongwa. Hunyanzvi hwake hunosanganisira kuyedza nedhijitari matekinoroji, gwara rekugadzira, webhu uye nharembozha app UI / UX dhizaini uye ndiye mubatsiri Shingairira Kutaridzika.
3 Mienzaniso Inesimba yeMashandisiro Ekushandisa Mobile App Beacon Technology kusimudzira Retail Kutengesa
China, Gunyana 16, 2021 China, Gunyana 16, 2021 Michael Frederiksen
Mabhizinesi mashoma kwazvo ari kutora mukana weasina kubatika wekubatanidza tekinoroji tekinoroji mumaapps avo kuti awedzere kuita kwavo uye mikana yekuvhara kutengeswa kakapetwa kagumi uchishandisa proximity kushambadzira vs echinyakare kushambadzira nzira. Kunyange hunyanzvi hwekwenikosi hwemabhaconi hwaive 1.18 bhiriyoni emadhora ekuUS muna 2018, inofungidzirwa kusvika pamamiriyoni gumi nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica muna 10.2. Global Beacon Technology Market Kana uine bhizimusi rekushambadzira kana rekutengesa, unofanirwa kufunga mashandisiro anoita